राष्ट्रपति तपाइलाइ कार्पेट फेर्न मन छ, हामीलाई रास्ट्रपती फेर्न मन छ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/राष्ट्रपति तपाइलाइ कार्पेट फेर्न मन छ, हामीलाई रास्ट्रपती फेर्न मन छ !!
राष्ट्रपति तपाइलाइ कार्पेट फेर्न मन छ, हामीलाई रास्ट्रपती फेर्न मन छ !!
काठमाडौंको बालुवाटारवाट सुरु भएको सरकार विरुद्धको प्रदर्शन अहिले मुलुकका अन्य मुख्य शहरहरुमा पनि फैलिएको छ । विहिवार वुटवलमा सुरु भएको प्रदर्शन शुक्रवार पनि जारी रहेको छ । गएको २५ गते वालुवाटारमा अचानक निस्केको युवाहरुको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
त्यस यता वालुवाटारमा दिनहुँ प्रदर्शन जारी छ । प्रहरीले अश्रुग्यास देखि पानीको फोहरा हान्ने गरेको छ । तर प्रदर्शन रोकिनुको साटो झन अन्य शहरमा पनि फैलिएका छन् । यस अघिका प्रदर्शन भन्दा यो प्रर्शनमा फरक शैली देखिएको छ । यस अघिका प्रदर्शनमा युवाहरु सहभागी भएपनि ति ग्रामीण क्षेत्रका थिए । उनीहरुलाई नेताले आफै शहर र प्रदर्शन स्थलसम्म ल्याउने गरेका थिए ।
तर यो पटकको प्रदर्शनमा शहरीया युवाहरुको सहभागीता बढी छ । उनीहरु सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर त्यसको समर्थन जुटाइरहेका छन् । शहरका पढेलेखेका युवाहरुको प्रदर्शनमा निकै रोचक लाग्ने नारा प्रर्दशन गरेका छन् । प्रदर्शनको शैली पनि फरक छ ।
विभिन्न जनावरका मुखुण्डो लगाएका युवाहरु मागलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । वुटवलमा शुक्रवार जारी प्रदर्शनमा युवाहरुले लिएको प्लेकार्ड निकै रोचक र आकर्षक थिए ।
शुक्रवार काठमाडौंको वशन्तपुरमा पनि प्रदर्शन जारी छ । वशन्तपुरमा माफ गर्नुहोला तपाइले सम्पर्क गनु खोज्नुभएको सरकार यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्न ब्यस्त छ भन्ने प्लेकार्ड लिएका छन् । वुटवलका युवाहरुले पिसिआर प्रविधिवाट सरकारले गरिरहेको कोरोना परिक्षणको कामलाई विरोध गरेका छन् । नो पिसिआर, नुन तेल बेसार लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै युवाले विरोधको अनौठो शैली प्रदर्शन गरेका छन् । अन्य तस्विर तल हेर्नुहोस
लाइसेन्स आवेदन बारे आयो यस्तो खबर ! पुरा पढ्नुहोस !